Sangataawwan Yaada Haaraa Maddisiisuu USAID Misooma Milkaahef
Misooma kan milkaa’e gochuuf yaadawwan haaraa maddisiisuuf tattaaffii godhuun jarmyaan gargaarsa misooma sadarkaa addnyaa kan Yunaayitid Isteetis laboraatoriin dhaaba misoomaa kan sadarkaa addunyaa sagantaa hojii misoomaa uumuu qopheessee jira.
Daayirikterri ol aanaan waajjira laabraatootii misooma addunyaa Harry Baader akka jedhanitti kun namni addunyaa kamiinuu keessa jiru, yeroo kamittuu yaada gaarii ta’e mala itti dhiyeessuu kan danda’uu dha.
“Ennaa sanatti Laaboraatootiin sun isaan waliin hojjeta. Hojiiwwan murtaa’oo ta’aniif kafaltii raga irratti hundaa’etu jira. Akkasumas dandeettii uumuu fi michummaa aadaan hin baratamne uumuu dhaan misooma biyya isaanii fi biyya ka biroo keessaaf bu’aa qixxee ta’e gumaachuu danda’u" jedhan.
Sagantaa misooma daldala uumuutiin USAID furmaata ba’ii qabu horachuuf waaltaalee dhuunfaa mindeessuun hojjetaa jira. Fakkeenyaaf Fenix Internatioinal jedhan Daayirikteichi Baader.
Fenix, mana nama dhuunfaaf soolaarii guyyaatti humna ibsaa hanga tokko maddisiisuu danda’u galchaaf. Namni sun guyyaa sanaaf gatiii isaa baasuu danda’a taanaan guyyaatti saantima 33 baase haa jennu. Sana booda saatelaayitii karaa waajjira isaanii haadhoo, switichii soolaaricha ittiin qabsiisanii fi dhaamsan qopheessuu dhaan wal quunnamuu danda’u. kunis ennaa naannoo ibsaan hin jirre irraa fagoo ta’u fayyadama elektirkiif mala ajaa’ibaa ti jedhan.
Kan hojii isaa bal’isuuf deggersa maallaqaa barbaadu Fenix, USID biraa investment-f kan oolu gaafatee jira. USAID biraas doolaara miliyoona tokko argatee jira. Finix, maallaqa sana hojii isaa babal’isuu, maallaqa itti dabalaa invest gochu dhaan hojii isaa guddisuuf itti gargaarameera.
Kanaaf namoonni Aksiyoonii qaban rakkoo jiru furuu dhaan maallaqa argamsiisuufii kan danda’u tajaajila ibsaa waaltaa akka dhiyeessan sunis doofummaa dhabamsiisuuf mala dandeessisu qopheessinee jirra. Kunis oomisha qonnaaf oola, beela hanqisuu danda’a.
kun immoo guddina dinagdeef gumaacha. Sababiin isaas hiyummaa cimaa dhabamsiisuuf dhimmi ihoo kan ta’e keessaa, namni tokko misooma bu’uuraa digitaalii addunyaa waliin akka wal argu gochuu dha jedhu Baadir.
Kunis ba’ii fakkeenyummaa Fenix irraan kan ta’uu danda’u. garuu ennaa barbaachisaa ta’etti laboraatorii misooma addunyaa kan USAID-tiin kan deggerame jedhan jechuu dhaan gulaalaan har’aa yaada isaa xumura.